ताराखोला गाँउपालिकाको वडा नम्बर ५ मा ३ दिने कृषि प्राविधिक तालिम सम्पन्न – ebaglung.com
ताराखोला गाँउपालिकाको वडा नम्बर ५ मा ३ दिने कृषि प्राविधिक तालिम सम्पन्न
२०७४ माघ ६, शनिबार २१:३६	अन्य समाचार
खेमराज अर्याल, बागलुङ २०७४ माघ ६ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्र्तगत ताराखोला गाँउपालिकाको वडा नम्बर ५ मा ३ दिने कृषि प्राविधिक तालिम सम्पन्न भएको छ । विहिबारबाट सुरु भएको तालिमको आज समापन गरिएको हो ।
गाँउपालिकाको वडा नम्बर ५ आलुपकेट सञ्चालक समितिमा आवद्ध कृषि समुहका ३५ जनाका लागी आलु उत्पादन र मल बनाउने विषयमा जानकारी दिइएको हो । जिल्ला कृषि विकास कार्यलय बाग्लुङका वालि संरक्षण अधिकृत सुजित पौडेल कृषि विकास कार्यलयका प्रा.स. राजु प्रसाद शर्मा गाउँपालिकाका नाप्रस गोविन्द थकुल्ला कृषि प्राविधिक शिव प्रसाद शर्मा लगाएतका कृषि प्राविधिकले तालिममा प्रशिक्षण दिएका थिए ।
तालिममा आलु कसरी लगाउने आलुमा लाग्ने रोग र तिनको उपचार पद्धती तथा गोठे मल जैविक मल र प्रांगारिक मल बनाउने तरिकाबारे जानकारी गराइएको थियो । आज भएको समापन कार्यक्रममा सहभागीहरुले तालिममा सिकेका कुरा व्यावहारमा उर्तान आग्रह गरेका थिए । यस्तै सहभागिका तर्फबाट कृषकहरु जयलाल गैरे र राजकुमारी गौतमले आफ्नै गाँउठाउँमा आएर कृषि तालिम दिएकोमा खुसी व्यक्त गरेकी थिईन । साथै कृषकहरुले तालिममा सिकेका कुरालाई व्यावहारमा उतार्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।
ढोरपाटन नगरपालिका–६ अधिकारीचौरमा १ दिने मैन बत्ति बनाउने तालिम सम्पन्न !
सहकारीले हरेक समुदायलाई सहजता ल्याउछ – वडाध्यक्ष पौडेल